Soosaaraha mootada Shiinaha Soosaaraha mootada iyo alaab-qeybiye | Shentuo
Rakaabka Gawaarida Mootada gadaal
Muraayada hore mooto Harley
Baaskiil mooto loogu talagalay KYMCO 250 300
Muraayadaha mootada ee Honda LEAD 125
Muraayada BMW F-1200GS
Xaashida PMMA, waxaan sidoo kale ugu yeernay Acrylic. Waa nooc caag ah oo leh hufnaan aad u wanaagsan iyo heer-kul-kulub. Hufnaanta ayaa gaareysa 99%, iyo 73.5% UV. Maaddadu waxay leedahay awood farsamo oo aad u wanaagsan, kuleyl-adkaysi iyo adkeysi wanaagsan, sidoo kale waxay leedahay caabbinta daxalka iyo u-caabbinta dahaadhka.
Magaca alaabta: Muraayada hore mooto Harley
Nooca mootada la waafajiyay: Harley General
Cabir: 35CM * 58CM25CM * 54CM62CM * 73CM
Muraayada hore mootada Harley Kani waa Harley Guud ee loogu talagalay moodooyinka mootooyinka
Muraayada hore waxaa loogu talagalay firfircooni hagaagsan, muuqaal qurxoon iyo firfircooni xoog leh. Muraayada hore ee lagu rakibay IBX ayaa safarkaaga soo socda ka dhigi doonta mid aad u xiiso badan.
1. Ku rakib muraayada hore mootada si aad u yarayso jihada dabaysha ee jirka fuushan
2. Safarkaaga fog ka dhigo mid raaxo leh, waaya aragnimo cusub oo safarro kala duwan ah
3. Qalabka PMMA wuxuu ka sameysan yahay acrylic saameyn sare leh, kaasoo siiya shaashad kasta awood dheeri ah iyo dabacsanaan. Maaddadu waxay leedahay awood farsamo oo aad u wanaagsan, iska caabbinta kuleylka iyo adkeysi wanaagsan, waxayna sidoo kale leedahay caabbinta daxalka iyo dahaadhka.
4. Dhumucda muraayada hore ee mootada waxay ka caawisaa inay nuugto gariirka xawaare sare leh waxayna bixisaa iska caabin dilitaanka ama xoqida
Muraayada hore ee saxda ah ayaa ku habboon qaabkaaga, ka aamin iyo raaxo badan
Waxay leexisaa dabayl badan, taas oo darawalka siinaysa khibrad wadis nasasho leh oo aamin ah.
Muraayad la'aan, madaxa, xabadka iyo dhabarka waxaa ku socda dabayl xoog leh, taas oo ka dhigaysa kuwo u nugul qabowga dabaysha.
Saamaynta ka dib rakibidda muraayadda hore
Muraayadaha hore, 70% dabaysha ayaa laga ilaaliyaa qabowga
Baakadaha mootada IBX ee baakadaha loo qaabeeyey, oo tilmaamaya astaanta, ilaalinta lakabyo badan, si fiican uga hortagga xirashada, si aad u soo bandhigto sheyga ugu habboon.
KOOXDA ADEEGA XIRFAD LEH
Goobtan, waxaan nahay khabiiro aad ku kalsoonaan karto. Adaa ku aaminay, ku dadaal wixii karaankayga ah. Adeeg xirfadeed, hubinta tayada.
Waxaan ku takhasusay horumarinta iyo iibinta taxanaha muraayada hore iyo qalabka mootada. U sii macaamiisha wax soo saar tayo sare leh oo kala duwan.
IBX waa mid ka mid ah sumadeena waxayna ku raaxeysataa sumcad sare dalal badan oo adduunka ah.
Hore: Muraayada hore mooto Harley Dyna
Xiga: Baaskiil muraayadaha guud
Muraayadaha Muraayadaha Harley Davidson
Harley Davidson Muraayada hore
Harley Davidson Muraayadaha Ultra Classic
Muraayada Harley Dyna
Muraayada hore ee mootada Harley
Muraayada hore mooto Harley Dyna
Alaabada Featured - Khariidadda bogga Muraayada hore ee Honda Nmax, Vespa Gts 300 Gtv Rakaabka Shandadaha, Vespa Gts Gtv 300 Boorsada Iskuulka, Baaskiilka Gaaska Baaskiilka, Rakibaadda Iskuulka Kawasaki, Baaskiil Baaskiil Flat ah,